स्वास्थ्य /जिबनशैली – Chautari Online
कोरोना भाइरस विरुद्ध हाल सम्म कुनै खास औषधि र खोप उपलब्ध छैन । त्यसैले अब यो कसरी नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा छ । यद्यपि जसको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो छ उसलाई यो रोगले उति धेरै ग्रसित बनाउन सक्दैन । मृत्युको जोखिम पनि रहँदैन । यसको ठीक विपरित प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएकाहरूलाई यो रोगले बढी नै सताउने एवं ज्यानै पनि जान लिने जोखिम रहन्छ । यसर्थ कोरोना भाइरससँग जुध्नका लागि एउटै सर्त हो, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु । १. मेवाः मेवा भिटामिन सी र भिटामिन ए ले भरपुर फलफूल हो । एउटा मध्यम आकारको मेवामा हाम्रो शरीरलाई दैनिक चाहिने भन्दा डेढ गुणा ज्यादा भिटामिन सी पाईन्छ । भिटामिनका अलावा मेवामा माछामासुमा पाईने कठिन प्रोटिनलाई पचाउन सक्ने प्यापिन नामक ईन्जाइम पनि पाईन्छ । मेवामा पोटासियम, भिटामिन ए, भिटामिन बी कम्प्लेक्सेस र फोलिक अम्ल पनि पाईन्छ । यी सबै भिटामिन, खनिज
यदि तपाईको खुट्टाको कुर्कुच्चा फुटेको छ भने त्यसले तपाईंको चिन्ता बढाउँछ । यो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि महिलाहरु विभिन्न उपायहरु अपनाउने गर्छन् । विभिन्न क्रिम र लोसन लगाउने गर्छन् । तर, त्यस्ता क्रिमले कुनै असर गर्दैन ।कुर्कुच्चा सफा गर्नुपर्छ:नुहाउँदा आफ्नो कुर्कुच्चालाई स्क्राबले सफा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा मृत छाला र फोहोर निस्कन्छ । बाहिरबाट घर आइसकेपछि आफ्नो खुट्टालाई तातो पानीमा डुबाएर सफा गर्नुपर्छ । कुर्कुच्चालाई नरम बनाउनुपर्छ:पैतालामा तेल ग्रन्थी नभएका कारण यो सधैं सुख्खा हुन्छ । त्यसको लागि तपाईं राति सुत्नु अगाडि त्यसमा तेल अथवा क्रिमले मसाज गर्नुपर्छ ।केराको गुदी:फुटेको कुर्कुच्चामा केराको गुदी लगाउनुपर्छ । त्यसलाई १० मिनेटसम्म राखेर त्यसपछि चिसो पानीले धुनुपर्छ । जबसम्म तपाईंको खुट्टा राम्रो हुँदैन । तबसम्म दिनमा एक पटक गर्नुपर्छ । कागती:खुट्टालाई कागती र तातो पानीक
हावामा रहेको प्रदुषणले कोरोना संक्रमण फैलने दर तीब्र हुनसक्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन् किनभने वायु प्रदुषणका कारण हाच्छिउँ गर्ने र खोक्ने व्यक्तिहरुको संख्यामा वृद्धि हुन्छ । स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार रोग र प्रदुषणको दोहोरो मारका कारण फोक्सोमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । त्यसैले यो सफा गर्न निकै आवश्यक छ । आउनुहोस्, यहाँ हामी फोक्सो सफा गर्ने तरिकाबारे जानकारी लिऔंः अदुवा चियामा हुने एन्टी इन्फ्लेमेटरी तत्वले श्वास नलीमा भएको विषालु पदार्थलाई बाहिर निकाल्न निकै सहयोग गर्छ । साथै, यसमा पोटाशियम, म्याग्नेसियम, जिंक र बिटा क्यारोटिनजस्ता औषधीय तत्व पनि पाइन्छ । एक शोधका अनुसार अदुवामा क्यान्सर सेल नष्ट गर्ने क्षमता हुन्छ । फोक्सोको सफाईका लागि नियमित रुपमा अदुवाको चिया पिउनुहोस् । २. दालचीनी चियाः फोक्सोसँग सम्बन्धि समस्या टाढा राख्न दालचीनी चिया पनि निकै उपयोगी हुन्छ । रोमन साम्राज्य
जाडोयाममा औसतमा भन्दा धेरै चिया वा कफी पिउने चलन धेरैको हुन्छ । कोही दूध राखेको चियाले ग्यास्ट्रिक गराउने भन्दै कालो चिया धेरै पिउने गर्छन् त कोही दूध चिया र कफी नै पिउन पनि डराउँदैनन् । तर चिया र कफी पिउनु ग्यास्ट्रिक र अपचको समस्या भएका बिरामीको लागि कत्तिको हानिकारक छ ? वास्तवमा हिउँदमा मानिसहरू विभिन्न प्रकारका फ्राइड रोस्ट खान्छन्, जसले एसिडिटी र ग्यास्ट्रिकको समस्याहरू निम्त्याउँछ । कहिलेकाँही यस्ता खानामा रहेको अम्लताले पेटको दुखाइ, छातीमा जकडिएको वा गम्भीर टाउको दुखाइको समस्या पनि निम्त्याउँछ । तर के मानिसहरू चिया पिएर ग्यास्ट्रिक या एसिडिटीको शिकार हुने गर्छन् ? यदि हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा चियाको विकल्पमा के पिउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न किसिमका खोजीहरू भएका छन् । ग्यास्ट्रिकको समस्यामा चिया र कफी २०१३ मा गरिएको एक अध्ययनल
काठमाडौँ । समान्यतया शरीरका विभिन्न भागमा स–साना डल्ला निस्कने समस्या धेरै मानिसको हुनसक्छ । यसले खासै हानी नगरेपनि नराम्रो भने देखिन्छ । जसका कारण स्वास्थ्यमा समस्या नगराउने यस्ता समस्यालाई हटाउन सजिलो उपायवारे जानकारी दिन गएका छौं । कसैको शरीरमा थोरै निस्कन्छ त कसैकोमा धेरै निस्केर हैरान बनाएको हुन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** यी डल्ला हेर्दा भने मनमा डर त उत्पन्न हुन्छ तर यसले स्वास्थ्य र शरिरलाई हानी भने गर्दैन । सौन्दर्यलाई कायम राख्न यसलाई हटाउने उपाय भने घरेलु रुपमै उपलब्ध छन् । केही उपाय अपनाएमा भने यस्ता डल्ला घरै बसेर हटाउन सकिन्छ । चुक अमिलोले यी डल्ला हटाउन मद्दत गर्छन् । एप्पल साइडर भिनेगर (स्याउबाट बनेको चुक अमिलो) ले सजिलै डल्ला हटाइदिन्छ । यसका लागि तपाईंले कपास चुक अमिलोमा डुबाउनुस् । त्यसपछि यसलाई छालाका डल्लामा दिनको दुईतीनचोटि घोट्नुस् । यो प्रक्रिया
कोरोना भाइरस विरुद्ध हाल सम्म कुनै खास औषधि र खोप उपलब्ध छैन । त्यसैले अब यो कसरी नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा छ । यद्यपि जसको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो छ उसलाई यो रोगले उति धेरै ग्रसित बनाउन सक्दैन । मृत्युको जोखिम पनि रहँदैन । यसको ठीक विपरित प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएकाहरूलाई यो रोगले बढी नै सताउने एवं ज्यानै पनि जान लिने जोखिम रहन्छ । यसर्थ कोरोना भाइरससँग जुध्नका लागि एउटै सर्त हो, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु । प्रतिरक्षा प्रणाली भोजन, व्यायाम र विश्राम, विचार एवं व्यावहारको सन्तुलित एवं समूचित उपयोगले बलियो बन्दछ । प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो भएको खण्डमा कोरोना भाईरस रोगलाई समेत सजिलै जित्न सकिने हुनाले यो रोग लागेकाले वा संभावित जोखिममा भएकाहरुले निम्न लिखित खानेकुरा हरूलाई आफ्नो खानामा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । १. मेवाः मेवा भिटामिन सी र भिटामिन ए ले भरपु
हरेक दिन ८ देखि १० गिलास पानी शरीरको लागि आवश्यक हुन्छ र दिनमा तीन पटक तातोपानी पिउने बानी बसाउनुभयो भने तपाईंंको शरीर बिरामी हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ । यसका फाइदाहरु – adadad १. तौल कम गराउँछ तपाईंंको तौल लगातर बढिरह्यो र धेरै कोसिसपश्चात् पनि कुनै असर गरेन भने तातो पानीमा कागती मिसाएर लगातार तीन महिनासम्म पिउने गरेमा तपाईंले फरक अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं स्वास्थ राम्रो चाहनुहुन्छ भने खाना खाएपछि १ गिलास तातो पानी खाने गर्नुहोस् । २. चिसो हुनबाट बचाउँछ यदि तपाईं अस्वस्थ हुनुहुन्छ, छातीको चिसोले सताइरहेको छ भने तातो पानी पिउन लाभदायक हुन्छ । तातो पानी पिउनाले गला पनि ठीक हुन्छ । यसको सेवनले आराम मिल्छ । ३. महिनावारीको दुःखाइ कम गराउँछ महिनावारीको दुःखाइ प्रायः महिलाहरुको नियमित कामलाई नै रोकिदिन्छ । तातो पानीले यो दुःखाइलाई कम गर्न सक्छ । यसरी तातो पानीले पेटको दुःखाइ कम गर
विराटनगर, ४ कात्तिक । संसारभरका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरूले कोभिडको हल्का संक्रमण भएको रिपोर्ट गरिरहेका छन् । विशेषज्ञका अनुसार केहीको लागि कोभिडको संक्रमण यति हल्का हुन सक्छ कि उनीहरूलाई भाइरल फ्लू जस्तो संक्रमणको लक्षणसँग छुट्याउन एकदम गाह्रो हुन्छ । यसले धेरै व्यक्ति संक्रमण भएको थाहा नपाई नै संक्रमणमुक्त भइसकेको संकेत गर्छ । कोभिडको संक्रमण भएमा निको हुन शरीर कत्तिको स्वस्थ छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । स्वस्थ, जवान र पहिलादेखि कुनै स्वास्थ्य समस्या नभएको मानिस सजिलैसँग निको हुने वा भाइरसको हल्का मात्र संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । कोभिड संक्रमण हुँदा देखिने लक्षणको बारेमा धेरै सचेतना भए पनि केही लक्षण हल्का भएका कारण ध्यान नदिन वा सजिलै भ्रमित पार्न सक्ने खालका हुन्छन् । ३ दिनभन्दा धेरैसम्म आएको ज्वरो, टाउको दुखाइ, नाक चिलाउने, सिगान बग्ने, स्वाद र गन्ध हराएमा, खान मन नलाग
विराटनगर, ३० असोज । सास फेर्न गाह्रो हुँदा असहज र कष्टकर अनुभव हुने गर्छ । सिढीमा चढेपछि वा रुघाखोकीबाट पीडित हुँदा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या धेरै कारणले हुन सक्छ । यो अस्थायी वा केही गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाको कारण पनि हुन्छ । कहिलेकाँही सास फेर्दा देखिने समस्यालाई घरमै सजीलै समाधान गर्न सकिन्छ । तर, प्रत्येक दिन वा लगातार सास फेर्न समस्या भएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिनु पर्ने हुन्छ । सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या भए गर्न सकिने घरेलु उपायः अदुवा वा अदुवा हालेको चियाले फाइदा गर्छ । अदुवाले श्वासप्रश्वासको संक्रमणको कारण हुने सासको समस्यालाई कम गर्न मद्दत गर्छ । अदुवामा भएको एन्टी–इन्फ्लेमेटरी गुणका कारण फोक्सो फुल्ने समस्यालाई कम गर्न सक्छ । रुघाखोकी वा फ्लुबाट पीडित भएको कारण सास फेर्न गाह्रो महसुस भइरहेको छ भने नाकमा सिँगान र फोक्सोमा खकार भरिएको का
बिहान ट्वाइलेट बस्दा कति समय लाग्छ? कत्तिको गाह्रो हुन्छ? कत्तिको गन्ध आउँछ? ध्यान दिनुभएको छ? यही बिहानीबाट हाम्रो दिनको सुरुवात हुन्छ। बिहान ठीक समयमा पेट सफा हुने गरी दिसा नहुनु नै कब्जियत हुनु हो। तर दैनिक दिसा भएर पनि दिसा खलाँस भएको महसुस नुहनु, पेट भारी हुनु पनि कब्जियत हो। यसलाई अर्को अर्थमा अपच पनि भनिन्छ। कब्जियत भए नभएको थाहा पाउने कसरी? १. शौच गर्दा लाग्ने समय हेरेर– बिहान दिसा बस्दा करिब ३ देखि ५ मिनेटमा गरी सक्नुपर्छ। अन्यथा अपच भनेर बुझ्नुपर्छ। २. दिसाको प्रकारले– हामीले खाएको खाना सही तरिकाले पाचन भए दिसा सेलजस्तो बाँधिएको नरम आउँछ। यदि दिसा कडा वा पातलो भएमा कब्जियत भयो भनेर बुझ्नु पर्छ। ३. दिसाको गन्धले– दिसा बस्दा नाकले कति अप्ठ्यारो महशुस गर्छ? जति चर्को गन्ध त्यति कब्जियत हुन्छ। ४. मलद्वारमा कत्तिको च्यापच्याप लाग्छ हेरेर– दिसा गरिसकेपछि पखाल्दा मलद्वारमा